Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanapahana karama: Raikitra ny adin’ny fanjakana sy ny mpiasam-panjakana
Fanapahana karama: Raikitra ny adin’ny fanjakana sy ny mpiasam-panjakana
Tsy noraharahian’ingahy Praiminisitra Solonandrasana Olivier akory ny fitarainan’ny mpiasam-panjakana tapaka karama tamin’ny volana desambra 2017 ity. Samy milaza ny filazany ny praiminisitra sy ny minisitrin’ny asam-panjakana sy ny asa, Maharante Jean De Dieu. Ity minisitra ity izay nanambara tamin’ny herinandro lasa iny fa fahadisoana no nitranga teo amin’ny solosaina. Nialatsiny tamin’ireo mpiasam-panjakana tsy tokony ho tapaka karama koa izy tamin’izany. Nilaza koa izy fa 17000 no mpiasam-panajaka matoatoa raha ny tatitra tonga eo aminy koa.
Ingahy Mahafaly Olivier Solonandrasana indray nefa dia nilaza tamin’ny alakamisy faha 28 desambra 2017 raha nitafa tamin’ny mpanao gazety fa 7000 no mpiasam-panjakana matoatoa amin’izao fotoana izao. Eo amin’ny 3000 eo ho eo no efa naverina ny karaman’ireo tapaka ireo hatramin’izao. Ny mahagaga dia tsy mitovy fijery tanteraka ny mpikambana amin’ny governemanta amin’ity raharaha ity. Ingahy minisitra Maharante nilaza ny hijery vahaolana maika hoan’ireo mpiasa tsy matoatoa ireo ka hamerenana ny karamany maika , saingy ingahy Praiminisitra indray dia nilaza fa mbola hisy ny “vague” na andiany manaraka hotapahana karama. Nambarany koa fa tsy maintsy atao ity raharaha ity satria be loatra hono ny mpiasam-panjakana izay mandany volam-panjakana fotsiny.Ny 70% ny volam-panjakana rehetra dia lany avokoa raha ny filazany hatrany ka tsy maintsy ahena izany. Izany fanamarihana izany dia nolazainy fa avy amin’ny vondrona erôpeanina hono. Noho izany tsy maintsy ahena izany mpiasam-panjakana.
Ankilan’izany indray dia efa nilaza ny mpiasam-panjakana izay tapaka karama ireto fa tapitra ny fe-potoana nomen’izy ireo ny fanjakana hamerenany ny karama omaly zoma faha 29 desambra 2017. Tsy mbola vita nefa izany ka dia hiditra amin’ny fitokonana izy ireo. Tsy ireto mpiasam-panjakana tapaka karama ireto ihany nefa no tsy faly tamin’ny fanambaran’ny praiminisitra Solonandrasana Olivier iny fa ny mpiasa rehetra. Manahy mafy amin’ny fahatapahan’ny karamany koa ry zareo amin’ny volana janoary 2018 araka ny voalazan’ity praiminisitra ity. Mandeha dia mandeha ny fifandraisana amin’ny tambazotra sosialy amin’ny firesahana ity raharaha ity amin’izao fotoana izao, ary ny hiarahan’izy ireo mientana amin’ny namany hanohitra ny fomba fanapahana karama tsy voafehy ity. Mazava izany fa tsy maintsy haneno ny sarom-bilany manomboka amin’ny volana janoary 2018 io.
Mandeha dia mandeha ny resaka fa efa tsy mifankahazo intsony ny filohampirenena sy ny praiminisitra ankehitriny. Voalazan’ity loharanom-baovao akaiky ny filohampirenena tafaresaka taminay ity fa tsy mandray ny praiminisitra intsony ny filoha raha tsy amin’ny filakevitrin’ny minisitra ihany. Niteny ihany koa ity olona ity fa ratsy be amin’izao fotoana izao ny fifandraisana ao amin’ny samy mpikambana ao amin’ny goverenemanta ao. Porofo amin’izany ny filazana ataon’ny praiminisitra sy ny minisitrin’ny asa izay mifanohitra io.
Hoan’ity olona ity dia nambarany mahitsy fa mifampitsapa hery ingahy Solonandrasana Olivier sy ingahy Hery Rjaonarimampianina amin’izao fotoana izao satria nanamafy ity olona ity fa tsy maintsy hisy ny fanovana praiminisitra atsy ho atsy. Ingahy Mahafaly Olivier nefa tsy hanaiky hiala moramora satria fantany ny zavatra miandry azy ka dia io manao izay hisian’ny korontana io. Ho hitan-tsika eo ihany ny tohin’ny raharaha tsy ho ela.